Warbixin: Al-Shabaab oo maanta seddax weerar oo culus ka geystay hal gobol – Hornafrik Media Network
Warbixin: Al-Shabaab oo maanta seddax weerar oo culus ka geystay hal gobol
Gobolka Shabellada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya waxaa ay maanta u aheed maalin qaraxyo iyo dagaal uu wajahay gobolkaasi, kadib markii Al-Shabaab weerarro culus iyo qaraxyo ay ka fuliyeen degmada Qoryooley, degaanada Ceel-saliini iyo Xaawo Cabdi oo ka wada tirsan gobolka Shabeellada Hoose.
Ugu horeen dagaal qaatay in ka badan 4-saac ayaa Al-Shabaab iyo militeriga Soomaaliya waxaa uu ku dhax-maray xerada ciidamada ee degaanka Ceel-saliini, halkaasi oo ay Al-Shabaab waabarigii hore ee saakay dagaal culus ku qaadeen.
Dagaalkan oo ahaa mid culus ayaa waxaa dhashay Khasaare isugu jir dhimsho iyo dhaawac.
Saraakiil ka tirsan ciidanka militeriga Soomaaliya oo aan soo xiganeyno ayaa inoo sheegay in dagaalkaasi ciidanka militeriga ay uga dhinteen in ka badan 10 askari, kuwaasi oo qaarkood meydadkooda la keenay magaalada Muqdisho, halka kuwa kalena lasoo wado sida qaar kamid ah ehelada askartaas geeriyooday ay inoogu warameen.
Dagaalkan oo ahaa midkii ugu adkaa uguna khasaaraha badnaa dagaaladii maanta ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose, sidoo kale waxaa dhaawac fudud uu kasoo gaaray taliyaha ciidanka Guutada koowaad ee qeybta 12-ka Apriil ee militeriga Soomaaliya Xasan Jaamici.
Meydadka rag ka tirsan Al-Shabaab ayaa haatan lagu soo waramayaa in ay yaalaan gudaha xerada Ceel-saliini oo ay saakay Al-Shabaab weerareen, waxayna sheegeen saraakiisha noo warantay in ay Shabaab dagaalamayaal badan looga laayey dagaalka Ceel-saliini.
Ciidamo ka tirsan militeriga Soomaaliya oo baxay degaanka Laanta-buuro ayaa gurmad ahaan ugu tagay ciidanlka lagu weeraray saldhigga militeri ee Ceel-saliini.
Dhinaca kale isla saakay Al-Shabaab ayaa seddax gaari oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa waxa ay ku weerareen degmada Qoryooley ee gobolka Shabeellada Hoose.
Gaari nuuca Soomaalidu u taqaano Caasi ama Homey iyo mid NOAH ah ayaa ka mid ahaa gadiidka ay qaraxyadaas Al-Shabaab u adeegsadeen, qaraxyadana waxaa xigey weerar toos ah oo Al-Shabaab ay ku qaadeen degmada Qoryooley.
Taliska ciidanka booliska ee degmada Qoryooley waxa ay sheegeen in ay fashiliyeen labo ka mid ah qaraxyadii is-miidaaminta ahaa oo aysan geysan wax khasaare ah, halka qaraxa seddaxaad uu burburiyey buundadii degmada oo muhiim u aheyd isku socodka dadweynaha.
Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaarayo degmada Qoryooley ayaa sheegaya in weli rasaas goos-goos ah laga maqlayo duleedka degmadaas, waxaana ciidamada iyo Al-Shabaab ay isku horfadhiyaan banaanka hore ee Qoryooley, sida ay noo sheegeen dadka deegaanka.
Isla gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan inta u dhaxeysa degaanada Xaawo Cabdi iyo Lafoole ayaa waxaa ka dhacay labo qarax oo lala beegsaday ciidamo gurmad ah oo baxay magaalada Muqdisho oo ku wajahnaa degaanka Ceel-saliini oo Al-Shabaab weerareen.
Laba miino ayaa loo dhigay ciidamadaas, waxayna dad ka ag dhawaa goobta ay noo sheegeen in ciidamadii ay haleeshay miinadaas ay soo gaartay wax yeelo iskugu jirta dhimasho iyo dhaawac, in kastoo aysan bixin karin faahfaahin rasmi ah oo ku aadan khasaaraha soo gaaray askarta.
Labadaas qarax kadibna Al-Shabaab ayaa ciidamada ku soo qaaday weerar toos ah oo sida la sheegay mudo kooban socday, waxuuna noqday dagalkii seddaxaad oo Arbacada maanta ka dhacay gobolka Shabeellada Hoose.
Gobolka Shabeellada Hoose waxaa uu ka mid yahay gobollada kaabiga ku haya caasimadda dalka ee Muqdisho, waxaana dadka falanqeeyo arrimaha amniga ay sheegayaan in hadii xal loo helo amniga gobollo ay ugu horeeyaan labada Shabeellle ay fududaaneyso si nabad loogu soo dabaallo magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya.
Wasiirka maaliyadda Itoobiya oo goor dhaw gaaray Hargeysa kadib hadalkii Muuse Biixi
Dowladda Soomaaliya oo war kasoo saartay howlgal lagu dilay xubno Shabaab ah